ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ခုံလွတ်ရှိနေပေမယ့် မတ်တပ်ရပ်စီးခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ရဲ့ အတုယူဖွယ် စိတ်ဓာတ် – Cele Channel
ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ခုံလွတ်ရှိနေပေမယ့် မတ်တပ်ရပ်စီးခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ရဲ့ အတုယူဖွယ် စိတ်ဓာတ်
လူတိုင်းဟာ ခုလို စိတ်ဓာတ်ထားဖို့ မလွယ်လှပါဘူး။ ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကတော့ တရုတ်ပြည်မှ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေး ဖြစ်ပြီး လူတိုင်းကို အတုယူဖွယ်ကောင်ကာင်းအောင် သင်ခန်းစာ ပေးခဲ့သလိုပါပဲ။
အသက် ၅၈ နှစ်အရွယ် ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးကြီး Wang Zhenzhen ဟာ သူ့ရဲ့ အမျိုးသားနှင့် အတူ ဆောက်လုပ်ရေး ဆိုက်ထဲမှာ အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ အသက်ကြီးပြီ ဖြစ်သော်လည်း မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် အမျိုးသားနှင့် တန်းတူ အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။
သူဟာ ညနေဆို ဘတ်စ်ကားနဲ့ အိမ်ပြန်ရပါတယ်။ အမျိုးသမီး ဖြစ်ပေမယ့် ဆိုက်ထဲမှာ အဝတ်လဲ ကိုယ်လက်သန့်စင်ဖို့ မလွယ်တာကြောင့် ညစ်ပတ်နေတဲ့ အဝတ်များနဲ့သာ အိမ်ပြန်ပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ သူမဟာ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ နေရာလွတ်တဲ့ ခုံတွေ အများကြီး ရှိပေမယ့် မတ်တပ်ရပ်ပြီးသာ စီးလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ ဘေးက ခရီးသည်တွေဟာ သူမကို ဘာလို့ ခုံလွတ်တွေမှာ မထိုင်ပဲ မတ်တပ်ရပ်တဲ့ အကြောင်းကို မေးလာပါတယ်။
သူမကတော့ သူရဲ့ ညစ်ပတ်နေတဲ့ အဝတ်တွေကြောင့် သန့်ရှင်းတဲ့ ခုံတွေကို မပေစေချင်တာရယ် တခြားသူတွေကို အညစ်အကြေးတွေ မပေးစေချင်တာကြောင့် ခုလို မတ်တပ်ရပါသာ စီးခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
Source – pthonlinemedia
Posted on October 27, 2017 Author Cele
အပျိုကြီးဂုဏ် တကယ်ဆို ကိုယ်တွေကစင်ပေါ်က ခြေချုပ်ကျသွားတဲ့ သူတွေကသာ စွပ်စွဲချင်နေကြတာ တစ်သက်တာလုံး မုဆိုးမ မဖြစ်တော့တဲ့သူ မိဘရင်ခွင်ဟာ အအေးချမ်းဆုံးဆိုတာ နောင်တမရခင် သိခွင့်ရသူတွေ သားဆိုးအမေ လင်ဆိုးမယား ဆိုးလိုက်တဲ့ ဂုဏ်ဒြပ်တွေ အဲ့ဒီ့ ဝဋ်တွေ မခံရတဲ့ ပညာရှိတွေ အပျိုကြီးဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မကြွေတဲ့ ပန်းတစ်ပွင့် ပိုက်ကွန်ပေါင်းများစွာလက်က ရုန်းထွက်နိူင်လာတဲ့ လင်းပိုင်ငါးလှလှလေး အင်္ဂလန်ရဲ့ ရွှေခေတ်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ ဘုရင်မ ပထမ အယ်လီဇဘက် ( 1533 – 1603 ) အဲ့ဒါ အပျိုကြီးရာဇဝင်ရဲ့ လျှမ်းလျှမ်းတောက် ကလေးလား ? ချစ်တတ်ရင် တစ်ကမ္ဘာလုံးက ကလေးကိုယ့်ကလေး မာသာထရေဇာ အိမ်ထောင်မပြုပေမယ့် တစ်လောကလုံးရဲ့ အမေ . . . အပျိုကြီးဆိုတာ မိန်းမတွေဟာ […]
မနက်လမ်းတိုင်း ပဲပြုတ်နဲ့ နံပြား လိုက်ရောင်းနေတဲ့ ကလေးလေး
Posted on November 20, 2017 Author Cele
မြဝတီက ပြည်တန်ဆာ တစ်ယောက်ရဲ့ ဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာ မိသားစုအကြောင်း
Posted on December 20, 2017 Author Myo Min Htet
မြဝတီဖက်မှာ ဖာခေါ်ချတုန်းက ဖာသည်မလေး ၁၈၊ ၁၉လောက်ပဲ ရှိအုန်းမယ် ကောင်လေးတယောက်က ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ လာပို့သွားတာဘော်ဒါ ၂ ယောက်က ၁ယောက် တလှည့်ဆီ ဗျင်းရင်းနဲ့ … စကားပြောဘာပြောပေါ့ နဲနဲကြာသွားတယ်… ခဏ နေတော့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ ကောင်လေးက အိမ်ရှေ့မှာ တီတီတီနဲ့ ဆိုင်ကယ် ဟွန်းလာတီးတယ်။ ကိုတွေက ဘာအထာလဲပေါ့ …. ဆော်လေးက ခဏလေးအကိုဆိုပြီး အောက်ဆင်းသွားတယ် ကိုတွေက ပိုက်ဆံလဲ မပေးရသေးတော့ ပြန်ရင်လဲ ပြန်ပစေပေါ့ စောင့်နေတာ … ၅ မိနစ်လောက်နေတော့ ဆော်လေးက ပြန်တက်လာတယ်… အကိုတို့ ညီမ သားလေး နို့အရမ်းဆာနေလို့ ကလေးကို အပေါ်ခေါပြီး နို့ခဏတိုက်ချင်လို့ ခွင့်ပြုပါနော် ဆိုပြီး ခွင့်တောင်းတော့ ကိုတွေလဲ ခေါ်လာလိုက်ပေါ့ ….. […]
မေမြို့နဲ့ အပြိုင်လှ နေတဲ့ စံထိပ်ထားဦး
ဂျပန်ကုမ္ပဏီက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဒေါ်လာ ၆၄ သန်းတန်ဖိုးရှိ ရထားအသစ် ၂၄ စင်းပံ့ပိုးပေးသွားမည်